Hooyo 21 jir ah oo uur leh ayaa ku dhimatay tooray lagu dhuftay |
Hooyo 21 jir ah oo uur leh ayaa ku dhimatay tooray lagu dhuftay
Bristol (Gabiley.net) Hooyo 21 jir ah oo uur leh ayaa ku dhimatay tooray lagu dhuftay, hooyadan oo lagu naanaysi jiray loona yaqaanay Marwo Sharaf ayay jaarkoodu oo Somali noo xaqiijiiyeen in la odhan jiray Amal, oo lahayd gabadh yar oo 4 jir ah waxaanay kale oo ahayd xaamilo uur leh oo ilmihii labaad caloosha ku sida” sidaa waxa qortay maanta Jornal ka soo baxa Bristol oo la yidhaahdo The POST.
Police-ka ayaa loogu yeedhay dabaqa 7aad ee guriga Longlands House ee ku yaala Barton Hill Fiidnimadii Axadii.
Waxa kale oo iyaguna goobta tegay dhakhaatiirta degdeg ah oo isku dayay inay badbaadiyaan hooyadaa oo ku jirtay xaalad miyir doorsoon ah, laakiin waxa meeshii ay dhakhaatiirtii kaga dhawaaqeen inay halkaa ku geeriyootay.
Waxa sidoo kale ay Police-ku xidheen nin 21 jir ah oo looga shakisan yahay inuu dilka geystay oo wali Police-ka gacantooda ku jira. Police-ku waxay yidhaahdeen saaka shilkan dhacay waxa loo eegayaa inuu xidhiidh la leeyahay waxay ugu yeedheen domestic incident oo macnaheedu yahay dhib soo kala dhex galay family. Waxa sidoo kale wali hawsha baadhitaanka wada Police ku shaqada leh dambiyada noocan oo kale ah ee loo yaqaano Forensic team oo ku sugan goobtii dilku ka dhacay.
Nin tukaan ku leh agagaarka goobta ayaa yidhi “Marwo oo uu u yaqaanay Amal ayaa u iman jirtay tukaankiisa si caadi ah oo macmiil u ahayd iyada iyo inanteeda yar”. Wuxuu kale oo intaa raaciyey “Inuu rumaysan yahay in dhawaan ay ka soo caawisay odaygeeda inuu ka yimaado Somalia ka dib markii uu soo maray Talyaaniga si ay u wada noolaadaan”. “Waxay ka soo caawisay inuu halkan yimaado, waxaanu halkan joogaa muddo yar markaa si wanaagsan isaga iskumaanu aqoon, laakiin iyadu waxay ahayd gabadh aad u qiimo badan oo wanaagsan oo edeb badan ayuu intaa ku daray. “Dhammaantayana shoog ayaa nagu dhacay markaan maqalnayd arrinta dilkan.
“Waxay kale oo lahayd qaraabo la degan Bristol oo iyaguna maqalka warkan aad uga naxay, waana xaalad murugo badan” ayuu ku daray.
Warka Wargeysku arrintan ka qoray halkan ka akhriso